Vanila - Wikipedia
Ny vanila na lavanila dia zava-manitra fanao amin' ny sakafo izay azo avy amin' ny karazana ôrkidea sasany maniry toy ny vahy amin' ny faritra mafana sy manorana, avy any Amerika Afovoany, ka ny Vanilla planifolia no tena fantatra amin' izany. Ny teny nohagasina hoe vanila dia avy amin' ny fiteny espaniôla hoe vainilla.
Ny fitombon'ny vanilaHanova
Foto-banila mandady aminny hazo
Ny karazana vanila fiotiana dia ny Vanilla planifolia. Avy tany Mekisiko no nihaviana kanefa dia hita manerana toerana mafana rehetra (trôpika). Madagasikara nofirenena voalohany amneran-tany mpamokatra azy.
Ny vanila dia zavamaniry mandady (vahy) amin' ny hazo lehibe. Rehefa avela elaela dia mirongatra ho azy. Ny voan' ny vanila, ilay manitra, no tena fantarty ny olona ka atsoiny hoe vanila. izany fofona manintra izany dia vokatry ny fahamasahan' ny voniny. Ny vovo-boniny dia aparitaky ny bibikely toy ny tantely na ny olombelona.
Ny voankazo vanila dia ilay voany toy ny tsaramaso maintso. Ny voniny dia miloko mainty ohatra ny vovoka ary io no tena manitra sy miparitaka raha avela tsy otazana. Ny voniny dia tsy maniry anaty tany fa toa ny holatra.
Ire lohalaharana amin'ny famokarana vanila
tamin' ny taona 2005
Totaly maneran-tany 7.3
Ny Espaniôla no nitondra ny vanila avy any Mekisiko tamin' ny fotoanan' ny fitetezan-tany any Amerika. Ny orinasa Coca-Cola no tena mpividy azy hatramin' ny taona 1985. Nanomboka tamin' ny 1985 dia nampiasa vanillin (mitovy tsiro amin' ny vanila kanefa dia vita simika) ny orinasa Coca-Cola ka tsy nila vanila intsony ka nahatonga ny fitontongan' ny toekaren' i Madagasikara. Lasa 20 $ amerikana ny vidin' ny iray kilao tamin' izany fotoana izany. Nitentina 500 $ izy tamin' ny taona 2004. Nidina indray izany tamin' ny 2005.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanila&oldid=998802"
Dernière modification le 9 Desambra 2020, à 11:25
Voaova farany tamin'ny 9 Desambra 2020 amin'ny 11:25 ity pejy ity.